UMasipala nezinhlelo zokubhekana nezikhalo zomphakathi – Bayede News
UMasipala nezinhlelo zokubhekana nezikhalo zomphakathi
ABAHLALI nosomabhizinisi baseMsunduzi bakhala ngesimo sedolobha
ABAHLALI nosomabhizinisi baseMsunduzi bakhala ngesimo sedolobha abathi lingcole ngendlela exakile kuphinde kube ukulungiswa komgwaqo okushiywa kungaphelile osekwenze idolobha lamigodigodi.
Okunye okuvezwe osomabhizinisi ukuphela njalo kukagesi abathi kunomthelela emabhizinisini abo. Bathi sekunesikhathi eside belubika lolu daba kodwa lungathathelwa phezulu yingakho bebone ukuthi bahlangane kunokuba balubike ngokwehlukana.
Abahlali baseMsunduzi nosomabhizinisi bahlanganele eZindlini Zomkhandlu kulo Masipala beholwa ikhansela uMnu uManqoba Ngubo emasontweni amabili ngenhloso yokuzodlulisa ukukhathazeka kwabo ngesimo sedolobha kwabaphethe. Ukwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi nosomabhizini bathola izimpendulo kulolu daba uMasipala ulande abaphathi beminyango ehlukene kulo mhlangano.
Ukhansela uNgubo akapholisanga maseko uhlale enxebeni ebeka izikhalo zabo nathe uma eqhathanisa nesikhathi sakudala useshawa amahloni. Phakathi kwezinto akhale ngazo ukungcola kwedolobha, imigodi egcwele kuyona yonke imigodi eminye eshiywa kanjalo lapho kade kusetshenzwa khona, ukuphela kukagesi ngaphandle kwezaziso, izitamkoko ezigxaza indle ezinye ezingavalekile, utshani obunganqunywa, amalambu omgwaqo angakhanyi, kanye nodaba lwezitatimende zokukhokhela uMasipala.
UNgubo uveze nokuthi abasebenzi bakaMasipala bayawudelela umphakathi abalulandeli uhlelo lukaHulumeni iBatho Pele lokubeka phambili abantu.
Utshele umhlangano ukuthi okunye abakutholile ukuthi lapho kushiywa khona umgwaqo unemigodi kusuke kuyizinkampani eziqashwe uMasipala ezenza lokho, kodwa kusemahlombe akhe umasipala ukulandelela ukuthi umsebenzi wenziwa ngendlela nangokwesivumelwano.
“Ukungalungiswa ngendlela kwezakhiwo kwenza kugcine kungene abantu benze izinto ezingalungile badayise izidakamiswa noma kugcine kuhlala abantu abadayisa ngomzimba,” kuchaza uNgubo.
Ngaphambi kokuphendula kwezikhulu zikaMasipala abasebenzi nabo abebeyingxenye yalo mhlangano basike elijikayo ngezingqinamba abahlangabezana nazo uma kusetshenzwa.
Okunye okuvele kulo mhlangano ukuthi uMasipala unenkinga yamabhilidi nezakhiwo ezindala ezigcwele idolobha abanikazi bazo abangatholakali. Kuvele ukuthi phakathi kwezakhiwo ezingama-500 kuleli dolobha, ezingama-251 abanikazi bazo abaziwa okwenza ziphenduke imihhume yabaphangi.
UMasipala uthe usujube inkampani ezophuma inqina ithungathe abanikazi bamabhilidi futhi sekuvunyelwene nangokuthi umsebenzi wonke uhlinzekwe ngesamba esithile semali ngoba abanye abanikazi bamabhilidi sebalifulathela elakuleli. Umsebenzi wonke wokubathungatha uzoqala ngasekuqaleni kukaZibandlela.
UMnu uMoses Ngobese onguMeneja kwezokuqoqwa kwezikeletu uveze ukuthi uMasipala sewusebenzisa indlela entsha yokuqoqa izikweletu zawo ebizwa ngoSAP. “Ama-emails ezi- 39 000 Abengasebenzi obekwenza kube nzima ukuthi abantu bathunyelelwe izitatimende zabo.”
Ongusomabhizinisi uNkk uKhan ubuzile ukuthi kungani labo izizindalwebu zabo ebezisebenza futhi bekwazi ukuthola nezincwadi ngeposi bebengathunyelelwa kodwa baboshwe ngabhande linye.
UNgobese uphendule ngokuthi kuyenzeka uthole ukuthi omunye unenkinga akakwazi ukungena kusizindalwebu sakhe ngaleso sikhathi okugcina ethole isitatimende ngeposi, ngokusebenzisa izindlela zombili uthe bagwema ukuthi kube nabantu abagcina bethe abazitholanga izitatimende zabo.
UDkt Smith onesejari edolobheni uveze ukhale kakhulu ngokuthi uma ushaya ucingo ubika okuthile utshelwa ukuthi kumele uye kwamanye amahhovisi kaMasipala i-AS Chetty, “Engabe bakhona yini onogada kuleya ndawo mukwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi uphephile njengoba thina sesikhulile sibuye sibanjwe inkunzi,” kuzikhalela uDkt uSmith.
Kuphinde kwavela nezikhalo eziqhamuke nabebemele i-Old Prison abathe esakhiweni abasebenzela kuso abathe bsanda kuthola isikweletu samanzi esiphezulu abagqigqe kwaze kwaguga isicathulo kwaMasipala bengazitholi izimpendulo.
Ephawula omele uMnyango wakwaCommunity Safety uMnu uMandla Zuma ululeke abahlali nosomabhizinisi ngokuthi uma befuna ukushintsha indawo yokusebenzela kumele babheke ukuthi leyo ndawo ihlanzekile yini, ngabe iphephile, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi bashintshele kuyo.
UZuma akazange akubalekele ukuthi abanaso isabelo mali sokulungisa izindlu zangasese zomphakathi ezigcina sezicekelwe phansi.
“Uphiko Lwezokukhuculula seluzosebenza ubusuku nemini ukuze isimo sokuhlanzeka sizoba sezingeni elifanele futhi kuzokwengezwa abasebenzi,” kuphetha uZuma.